Wararka Suuqa Kala iibsiga: Diaz, Ronaldo, Longstaff, Origi, Cantwell, Coutinho, Traore | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Kala iibsiga: Diaz, Ronaldo, Longstaff, Origi, Cantwell, Coutinho, Traore
Liverpool ayaa ku dhow inay 60 milyan ginni kula soo wareegto garabka reer Colombia Luis Diaz, oo 24 jir ah, kana tirsan Porto . (Sun)
Weeraryahanka Portugal Cristiano Ronaldo, oo 36 jir ah, ayaa laga yaabaa inuu ka tago Manchester United xagaagan haddii uusan aqbalin doorashada kooxda ee tababaraha joogtada ah. (MIrror)
Manchester United ayaa u soo bandhigtay ciyaaryahanka khadka dhexe ee Paul Pogba qandaraas cusub oo weyn oo ku kacaya 400,000 oo ginni isbuucii si ay uga fogaato 28 jirka reer France inuu beeca xorta ah kaga tago xagaaga. (SUN)
Newcastle ayaa diiday dalab uga yimid Everton oo ku aadan Sean Longstaff. 24-sano jirkaan ayaa qandaraaskiisu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedkan, laakiin Magpies ayaa rajeyneysa inay heshiis cusub ka saxiixdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee England. (Gaashaan Gazzette)
Newcastle iyo hal koox oo kale oo Premier League ah ayaa isha ku haya saxiixa khadka dhexe ee Norwich Todd Cantwell, 23. (Sky Sports).
Newcastle ayaa sidoo kale isha ku haysa 24 jirka daafaca uga ciyaara kooxda West Ham ee Issa Diop waxayna diyaarinayaan dalab 10 milyan oo gini ah. (L’Equipe via Hammers News)
Weeraryahanka Liverpool iyo Belgium Divock Origi, oo 26 jir ah, iyo 24 jirka weerarka uga ciyaara Bournemouth Dominic Solanke ayaa ka mid ah ciyaartoyda ay Newcastle isha ku hayso inay gabaad u raadiso Callum Wilson oo dhaawacan. (Telegraph)
Labo kooxood oo Premier League ah ayaa isku diyaarinaya saxiixa xiddiga Barcelona Philippe Coutinho, oo 29 jir ah iyadoo go’aan laga gaarayo kubadsameeyaha reer Brazil mustaqbalkiisa Jimcaha. (Sky Sports)
Tababaraha Paris St-Germain Mauricio Pochettino ayaa diyaar u ah inuu aqbalo dalab kasta oo uu ku noqonayo tababaraha Manchester United . Sun
Tottenham ayaa lagu wadaa inay Dalab cusub Ka gudbiso xidiga Wolves iyo Spain garabka uga ciyaara EE Adama Traore, 25 (Athletic)
Chelsea ayaan diyaar u ahayn inay bixiso lacagta lagama maarmaanka ah si ay amaahda khadka dhexe ee Saul Niguez, 27, uga dhigto saxiix joogto ah (Express)
Manchester United uma badna inay sameyso saxiix bishaan laakiin waxa ay bartilmaameedsan doontaa ciyaaryahan khadka dhexe ah xagaaga, iyadoo 22 jirka reer England Declan Rice uu bartilmaameed u yahay West Ham . (Talksport)
Arsenal ayaa dalab lacageed iyo ciyaaryahanba u dirtay weeraryahanka Fiorentina iyo Serbia Dusan Vlahovic, 21. (Ben Jacobs – CBS).
Leicester City iyo kooxo badan oo Premier League ah ayaa u baahnaan doona inay bixiyaan 33 milyan ginni si ay ula soo saxiixdaan weeraryahanka Club Bruges Charles de Ketelaere laakiin u dhaqaaqista 20 jirkaan ee Premier League ee Janaayo waa “gabagabo la sii saadaaliyey”. ( Leicester Mercury)
Barcelona ayaa ka fiirsaneysa inay amaah ugu dhaqaaqdo weeraryahanka Manchester United Anthony Martial iyadoo 26 sanno jirkaan heerka caalami ee dalka France uu si joogto ah ula soo wareegeyso dhamaadka xilli ciyaareedkan. (Sport – Isbaanish)
Barca ayaa sidoo kale isha ku heysa inay u dhaqaaqdo daafaca Chelsea iyo Denmark Andreas Christensen, 25. (Mundo Deportivo).
Everton iyo Newcastle ayaa kula biiray Arsenal tartanka loogu jiro saxiixa 24 jirka reer Brazil Bruno Guimaraes oo u ciyaara kooxda Lyon. (Standard)
Goolhayaha Liverpool Loris Karius, oo 28 jir ah, ayaa u dhaqaaqay Greuther Furth burburay, iyadoo kooxda Bundesliga ka dhisan aysan awoodin inay bixiso lacagta lagu soo afjarayo qandaraaska uu Jarmalka ku joogo Anfield. (Daily Star)
Weeraryahanka Jamaica Michail Antonio, 31, ayaa u saxiixay West Ham qandaraas cusub ilaa xagaaga 2025. (90 Min)
DEG DEG: FACEBOOK OO UKRAINE LA SAFTAY DAGAALKANA QAYB KA AH
RW Rooble oo Xafiiskiisa Ka Dajiyay Sawirka Farmaajo 30/12/2021
Dhacdo naxdin leh: Haweeney lagu dilay Baydhaba kadibna Suuli lagu riday...
Jurgen Klopp oo Qirtay, in kooxdiisa Liverpool aanay suurtogal u ahayn...
Wasaarada Waxbarashada K/G oo war la yaableh kasoo saartay doorashada Baraawe
Farmaajo oo 11 sano kadib iska furay maasgaradii siyaasadeed soona afjaray...
Aqriso: Liiska xubnaha golaha shacabka ku metelaya guddiga doorashada Madaxweynaha
PSG oo u dhaqaaqday ciyaaryahanka khadka dhexe ee Leeds Phillips